I-Coronavirus isasazeka isuka komnye umntu iye komnye, xa umntu enxibelelana nokufihlakala komntu osulelekileyo. Ukosuleleka yintsholongwane kuchaphazela indlela yokuhanjiswa ngqo. Ukunxiba imaski kunokukuthintela ekuphefumleni intsholongwane ngqo kwindawo emanzi. Khumbula ukuba uhlamba izandla zakho rhoqo ezinokuthi zithintele intsholongwane ukuba ingene emzimbeni wakho ngezandla.
Imaski ye-KN95 inokusetyenziswa kwakhona phantsi kweemeko eziqhelekileyo. Kodwa ukuba imaski yonakalisiwe kwaye ibekwe amabala, kufuneka ithathelwe indawo ngoko nangoko.
Ngaba imasks ye-KN95 ingasetyenziswa ngokuphindaphindiweyo emva kokuchaphazela isifo?
Umntu othile kwinethiwekhi usebenzise i-blower enamandla amakhulu ukubetha kangangemizuzu engama-30 kwaye afafaza ngotywala ngonyango ukuze abulale iintsholongwane kunye nokutshiza, emva koko asebenzisa iimaski ezingama-N95 ephindaphindiweyo.
Nangona kunjalo, iingcali zicebisa ukuba zingakwenzi oku. Uninzi lwabantu lucinga ukusebenzisa umbane wombane onamandla aphezulu ukubetha imaski kangangemizuzu engama-30, ukutshiza ngaphakathi nangaphandle kwemaski ngotywala kwezonyango kwaye banethemba lokubulala intsholongwane ehambelana nomphezulu kwaye bayiphinde bayisebenzise. Nangona kunjalo, iya kutshintsha ukungcola kwefungi kwimaskhi engu-N95 kwaye ayiyi kudlala indima efanelekileyo yokhuselo.
Ukuba abantu banxiba imaski engu-N95 kwindawo enabantu abambalwa, abantu banokuyisebenzisa izihlandlo ezi-5, beyibuyisela kwindawo eyomileyo kunye ne-ventilate.Akukho mfuneko yokutshisa kunye nokutshiza utywala.
Ukuba abantu abakwindawo enabantu abaninzi, njengesibhedlele, kungcono ukuyibuyisela rhoqo. Imaski yokuhlinzwa ngokubanzi ayikhuthazwa ukuba isetyenziselwe ukuphindwaphindwa.Iiyure ezi-2 2 zibhetele.
Ixesha lokuposa: Jun-23-2020